Skynet Weather News ...(၁၉ - ၆ -၂၀၁၃) ရက်၊နေ့နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
မိုးလေ၀သ နေ့စဉ်သတင်:များ။ ( ၁၉ - ၆ -၂၀၁၃ ရက်၊ နေ့ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီ အချိန်တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၂၀)ရက်နေ့ အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၉-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၉)ရက်နေ့ အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၈-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၈)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၇-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၇)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၆-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၆)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၅-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၅)ရက်နေ့ အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၄-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၄)ရက်နေ့ အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၃-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၃)ရက်နေ့ အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၂ -၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၂)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၁-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၁)ရက်နေ့ အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၀-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၀)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၉-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၉)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၈-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၈)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၇-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၇)ရက်နေ့ အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၆-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၆)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၅-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်း တွင် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း တစ်ခု ဖြစ်လာပြီး၊ ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင် တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေ ပါတယ်။ (၄-၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ၅း၂၇ နာရီ တွင် post လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၅)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၄-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်အလယ်ပိုင်းမှာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း တစ်ခုဖြစ်လာနိုင် ပါတယ်။ (၃-၆-၂၀၁၃ ရက် နံနက် ၁၁း၃၁ နာရီ)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၄)ရက်နေ့ အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၃)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၂)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ(၁)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃၁-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် မေလ(၃၁)ရက်နေ့ အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃၀-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် မေလ(၃၀)ရက်နေ့ အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၉-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် မေလ(၂၉)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၈-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် မေလ(၂၈)ရက်နေ့ အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၇-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)0
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလ(၂၆)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၆-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလ(၂၆)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၅-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် မေလ(၂၃)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၂-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)0
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလ(၂၂)ရက် နေ့အတွက်မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၁-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၀၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)0
(၂၀၁၃)ခုနှစ် (၂၁)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၀-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလ(၁၉)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၉-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၀၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလ (၁၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၈-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နံနက်၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
(၁၆-၅-၂၀၁၃)ရက် နံနက်(၃) နာရီခွဲ အချိန် MAHASEN ရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ။ (မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ အချိန်တွင် Updateလုပ်သည်။)
မောင်တောဘေး နတ်မြစ်ထဲက ဖြစ်ရပ်တစ်ခု။( Update 11:30 am)
"မုန်တိုင်းမလာမီပြင်ဆင်ထားရန်"(Update on 15-5- 2013 at 11:30 am)
မုန်တိုင်း MAHASEN နဲ့ ပတ်သက်လို့ အကြံပြုချက်…. (၁၅-၅-၂၀၁၃) (နံနက် ၅း၄၅ အချိန်တွင် Update လုပ်သည်။)
01B MAHASEN ရဲ့ နောက်ဆုံး Update News (Posted on 15-5-2013 at 6;00 am)
(၂၀၁၃ခု၂)ခုနှစ်မေလ(၁၅)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၄-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နံနက် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 01B(MAHASEN) သတိပေးချက်အမှတ် (၁၁)(၁၃-၅-၂၀၁၃)ရက်၊ နံနက် (၃း၃၀) နာရီ အချိန်ထုတ်ပြန်သည်။
၂၀၁၃ခုနှစ် မေလ(၁၄)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၃-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ်၊မေလ (၁၃)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
(MAHASEN) ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိူင်း သတင်း(၁၂-၅-၂၀၁၃)နံနက် ၁၀း၃၀နာရီတွင်Update လုပ်သည်။
၂၀၁၃ခုနှစ်၊မေလ(၁၂)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နံနက် ၁၀၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
01B13 ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိူင်း သတင်း(၁၁-၅-၂၀၁၃)နံနက် ၀၉း၀၀နာရီတွင်Update လုပ်သည်။
မေလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၁၁)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၀-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ်၊မေလ (၁၀)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၉-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
မေလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၉)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၈-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
မေလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၈)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၇-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
မေလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၇)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၆-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ်၊မေလ(၅)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နံနက် ၁၀၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
မေလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၄)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
မေလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၃)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ်၊မေလ(၂)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁-၅-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၀း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
မေလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၁)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃၀-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၂၉)ရက်န့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၈-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နံနက် ၁၀၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၈ )ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၇-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၂၇)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၆-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၂၆)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၅-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၂၅)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၄-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၂၄ )ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၃-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၂၃)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၂-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီလ ၂၀၁၃ခုနှစ် (၂၁)ရက် နေ့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၁-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နံနက် ၁၁း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ပြီ၂၀၁၃ခု လ (၂၁)ရက် အတွကဧ် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၀-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ပြီ၂၀၁၃ခု လ (၁၉)ရက် အတွကဧ် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၉-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ (၁၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၈-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၀၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ဧပြီလ (၁၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၇-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၀၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီ၂၀၁၃ခု လ (၁၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၆-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နံနက် ၁၀၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ဧပြီလ (၁၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၅-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၀၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီ၂၀၁၃ခု လ (၁၅)ရက် အတွကဧ် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၄-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၀၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီ၂၀၁၃ခု လ (၁၄)ရက် အတွကဧ် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၃-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီ၂၀၁၃ခု လ (၁၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၂-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီ၂၀၁၃ခု လ (၁၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၁-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီ၂၀၁၃ခု လ (၁၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၀-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီ၂၀၁၃ခု လ (၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၉-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီ၂၀၁၃ခု လ (၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၈-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဧပြီ၂၀၁၃ခု လ (၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၇-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၀၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု ဧပြီလ (၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၆-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု ဧပြီလ (၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၅-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု ဧပြီလ (၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၄-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု ဧပြီလ (၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု ဧပြီလ (၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု ဧပြီလ (၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁-၄-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၃၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃၁-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၃၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃၀-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၂၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၉-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၂၆ )ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၆ -၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၂၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၅-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၂၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၄-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၂၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၃-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၂၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၂-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၂၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၁-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၂၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၀-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၁၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၉-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၁၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၈-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
မတ၂၀၁၃ခု မတ်လ (၁၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၆-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၁၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၅-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၁၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၄-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၁၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၃-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၁၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၂-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၁၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၁-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၉-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၈-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၇-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၆-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၅-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၄-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခု မတ်လ (၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁-၃-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၂၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၇-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၂၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၆-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၅-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၂၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၄-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၂၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၃-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၂၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၂-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၁-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၀-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၉-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၁၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၈-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများတွင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အညွှန်းကိန်းများ မြင့်မားနေပါတယ်။ (၁၅-၂-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ၅း၅၅ နာရီ အချိန်)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၅-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၁၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၃-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၂-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၁-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၁၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၀-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၉-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၈-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၇-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၆)ရက် အတွက် ခန့်မှန်းချက်။ (၆-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၆-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၅-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၄-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလ (၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁-၂-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၃၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃၁-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၃၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃၀-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၂၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၉-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၂၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၈-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၂၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၇-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၂၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၆-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၂၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၅-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၂၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၄-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၂၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၂-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၂၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၁-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၂၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၀-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၁၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၉-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၁၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၇-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၁၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၀-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၉-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၈-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၇-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၅-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၄-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလ (၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁-၁-၂၀၁၃ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃၁-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၃၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃၀-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၂၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၉-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၈-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၇-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၂၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၆-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၂၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၅-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၂၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၄-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၂၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၂-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၁-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၂၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၀-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၁၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၉-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၁၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၈-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၇-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၁၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၅-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၁၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၄-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၁၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၃-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၁၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၂-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၁-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၁၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၀-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၉-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၈-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၇-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၆-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၅-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၄-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁-၁၂-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၃၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃၀-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၂၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၉-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၂၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၈-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၂၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၇-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၂၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၆-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၅-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၂၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၄-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၂၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၃-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၂၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၂-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၂၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၂၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂၀-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၁၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၉-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၁၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၈-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊နေ့လည် ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းမှာ နိုဝင်ဘာလမိုးလွန်မုန်တိုင်းငယ် ထပ်မံဖြစ်ပြန်ပြီ။ (၁၆-၁၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၁၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၆-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၁၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၅-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၁၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၄-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပြီး၊ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်။ (၁၃-၁၁-၂၀၁၂ ရက်ဈ ညနေ ၅း၅၄ နာရီ တွင် update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၁၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၃-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၁၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၂-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၁-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
(11-11-2012) ရွှေဘိုမြို့အနီး အင်အား ပြင်းထန်သော မြေငလျင် လှုပ်ရှားသွားဖြင်း။ (နံနက် ၁၁း၁၅ နာရီ)
(၁၁-၁၁-၂၀၁၂) ရက်နေ့ မြေငလျင်သတင်း။ (နံနက် ၀၈း၀၀ နာရီတွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၁၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁၀-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၉-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၈-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၇-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၆-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၅-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၄) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၄-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၃) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၃-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၂) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၂-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၀၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနိုဝင်ဘာလ (၁) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ (၁-၁၁-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၃၁) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၃၁-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၃၀-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၂၉) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၉-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၂၆) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၆-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၅-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၂၄) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၄-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၃-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၂၂) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၂-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၉-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၁၈) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၈-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၇-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၁၆) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၆-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၅-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၁၃) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၃-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၁၂) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၂-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ပထမဆုံး မုန်တိုင်း စဖြစ်ပါတော့မယ်။ (၁၀-၁၀-၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ၁၂း၀၅ နာရီ အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်)
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၁၀) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၀-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၉) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၉-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၈) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၈-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၇) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၇-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၆) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၆-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၅) ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၅-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်
၂၀၁၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၄) ရက်အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၄-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ(၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၃-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ(၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁-၁၀-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၁၂း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၃၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၃၀-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၂၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၈-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၂၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၇-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၂၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၆-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၂၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၅-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၂၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၄-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၂၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၁-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၂၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၀-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၁၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၉-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၁၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၈-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၁၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၇-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၁၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၆-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၁၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၅-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၁၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၄-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၁၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၁-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၁၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၀-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၇-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၆-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၄-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၃-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁-၉-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၃၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၃၁-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၃၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၃၀-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၂၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၉-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၂၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၈-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၂၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၇-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၂၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၃-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၂၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၂-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၂၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၁-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၂၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၀-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၁၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၇-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၁၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၆-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၁၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။ News Content ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၁၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၄-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၁၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၃-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၁၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၀-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၉-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၈-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၇-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၆-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၄-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၃-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် (၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁-၈-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၃၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၃၁-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၃၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၃၀-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၂၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၉-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၂၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၈-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၂၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၇-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၂၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၆-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၂၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၅-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၂၄)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၄-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၂၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၃-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၂၂)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၂-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၂၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၁-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၂၀)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၀-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၉-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၈-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၇-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၆-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၅-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁၃)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၃-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။)
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၁-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၉-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၈-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၇-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၆-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၅)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁-၇-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၉)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၉-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၈)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၈-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၇)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၇-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၆)ရက် အတွက် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၆-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၅)ရက်မှ ဇွန်လ (၂၇)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၅-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၄)ရက်မှ ဇွန်လ (၂၆)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၄-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၃)ရက်မှ ဇွန်လ (၂၅)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၃-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၂)ရက်မှ ဇွန်လ (၂၄)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၂-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၁)ရက်မှ ဇွန်လ (၂၃)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၁-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၀)ရက်မှ ဇွန်လ (၂၂)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၂၀-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၉)ရက်မှ ဇွန်လ (၂၁)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၉-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၈)ရက်မှ ဇွန်လ (၂၀)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၈-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၀၁း၃၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၇)ရက်မှ ဇွန်လ (၁၉)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၇-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၁၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၆)ရက်မှ ဇွန်လ (၁၈)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၆-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၁၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၅)ရက်မှ ဇွန်လ (၁၇)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၅-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၁၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၄)ရက်မှ ဇွန်လ (၁၆)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၄-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၁၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၃)ရက်မှ ဇွန်လ (၁၅)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၃-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၁၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၂)ရက်မှ ဇွန်လ (၁၄)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၂-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၁၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၂)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၂-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၁၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၀)ရက်မှ ဇွန်လ (၁၂)ရက် အတွင်း အပူချိန်မြင့်တက်မှုအခြေအနေ ခန့်မှန်ချက်။ (၁၀-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်တည့် ၁၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၀)ရက်မှ ဇွန်လ (၁၂)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု ခန့်မှန်ချက်။ (၈-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၁၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၈)ရက်မှ ဇွန်လ (၁၀)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု ခန့်မှန်ချက်။ (၈-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၁၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၇)ရက်မှ ဇွန်လ (၉)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု ခန့်မှန်ချက်။ (၇-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၇)ရက်မှ ဇွန်လ (၉)ရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု ခန့်မှန်ချက်။ (၆-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၅)ရက်မှ ဇွန်လ (၇)ရက် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း ဒေသများမှာ မိုးကြီးနိုင်ပြီး အလယ်ပိုင်း ဒေသများမှာ အပူရှိန် မြင်ပမား နိုင်ပါတယ်။ (၅-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ(၅)ရက်မှ ဇွန်လ (၇)ရက် အတွင်း အပူချိန်မြင့်တက်မှုအခြေအနေ။ (၄-၆-၂၀၁၂ ရက်၊ မွန်လွဲ ၀၂း၀၀ နာရီ တွင် Update လုပ်သည်။))
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို မုတ်သုံဝင်ပြီ။ (၂၆-၅-၂၀၁၂ ရက် နံနက် ၀၉း၁၇ နာရီ)
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ(၂၃)ရက်မှ ဇွန်လ (၅)ရက် အတွင်း ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့ပိုင်းမှာ မုန်တိုင်း တစ်လုံး ဖြစ်လာနှိုင်။ (၂၃-၅-၂၀၁၂ ရက်၊ နံနက် ၀၂း၁၂ နာရီ)
အနောက်တောင် မုတ်သုံ လေဦး ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကို စတင် ၀င်ရောက် နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉-၅-၂၀၁၂ ရက်၊ နံနက် ၀၄း၃၃ နာရီ) (၁၉-၅-၂၀၁၂) ရက်နေ့ မှာ အနောက်တောင် မုတ်သုံလေဦး ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင် အတွင်း ၀င်ရောက်နှိုင် ပါတယ်။ (၁၄-၅-၂၀၁၂ ရက်၊ နေ့ ၁၂း၂၄ နာရီ)
ရန်ကုန်မြို့မှာ အပူချိန်တွေ မမြင်ပမားပေမယ်ပ အပူရှိန်တွေ အန္တရာယ်ရှိတဲပ အဆင်ပအထိ မြင်ပတက်နေ တတ်တာကို သတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။ (၁၃-၅-၂၀၁၂ ရက်၊ ညနေ ၅း၅၅ နာရီ)
ဒီနှစ် မိုးကြို ကာလမှာ ဧပြီ(၂၉) နဲ့ မေ(၇) ရက်တို့ဟာ အပူရှိန် အများဆုံး ခံစားရ တဲပနေ့တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့တောင် အာရှမှာ မုတ်သုံလေဦး ကို စတင် ခြေရာခံလို့ ရပါပြီ။ (၁၂-၅-၂၀၁၂ ရက်၊ ညနေ ၅း၀၅ နာရီ) မေလကုန်အထိ မိုးတိမ်တောင်များရဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ကို အထူး သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ (၁၀-၅-၂၀၁၂ ရက်၊ နံနက် ၀၉၀း၄၅ နာရီ)
ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင်ထဲက လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းဟာ ဆက်လက် ရှိနေသေးသော်လည်း ကုန်းပေါ်ကို ရွေ့သွား ခဲပတာကြောင်ပ မုန်တိုင်းဖို့ အလားအလာ လျောပနည်းသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (၈-၅-၂၀၁၂ ရက် နံနက် ၀၇း၀၀ နာရီ)
ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်းက လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းဟာ ဒီနေ့ မနက်အထိ အားကောင်းလာခြင်း မရှိခဲပသေးပါ။ (၅-၅-၂၀၁၂) ညနေပိုင်းမှာမှ အားကောင်း မလာခဲပရင် အားပျောပ ပျက်ပျယ် သွာဖို့ များပါတယ်။ စောင်ပကြည့် အဆင်ပသာ ရှိပါတယ်။ (၅-၅-၂၀၁၂) ရက်နေ့ မနက် ၀၆း၀၆ နာရီ)
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းတစ်ခု စတင် ဖြစ်ပေါ် နေပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေ ကတောပ စောင်ပကြည့် အဆင်ပပဲ ရှိပါသေးတယ်။ (၄-၅-၂၀၁၂ ရက်၊ ည ၇း၅၆ နာရီ)။ စောင်ပကြည့်နေစဲဖြစ်ပါတယ်။ (၅-၅-၂၀၁၂ နံနက် ၀၁း၀၅ နာရီ)
အမြင်ပဆုံး အပူချိန်တွေ သိသိသာသာ မကျဆင်း သေးပေမယ်ပ လေထု စိုထိုင်းဆ တွေ ကျဆင်းသွား တာကြောင်ပ အပူရှိန် မြင်ပတက်မှုတွေ ကျဆင်း သွားပါတယ်။ (၂-၅-၂၀၁၂ ရက်၊ ရန်ကုန် နေ့ ၁၂း၄၇ နာရီ)
(၂၉-၄-၂၀၁၂) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ မိုးအနည်းငယ် ရွာသွန်းပြီး တဲပနောက် လေထု စိုထိုင်းဆတွေ ပြန်လည် ကျဆင်းသွားကာ အပူအညွှန်းကိန်း တန်ဖိုး တွေလည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ပြန်လည် ကျဆင်း သွားပါတယ်။ (၁-၅-၂၀၁၂ ရက်၊ နေ့ ၁၂း၃၀ နာရီ)
(၂၉-၄-၂၀၁၂) ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အပူရှိန် ခံစားရမှုဟာ အမြင်ပဆုံး အဆင်ပကို ရောက်လာပြီး အန္တရာယ် ရှိတဲပ အဆင်ပကို ရေက်နေ ပါတယ်။ (၃၀-၄-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက် ၀၆း၄၅ နာရီ)
(၂၄-၄-၂၀၁၂)ရက်နေ့ နံနက် (၂)နာရီခွဲအချိန်မှာ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အနောက်တောင် ပိုင်း (အိန္ဒိယ အရှေ့ဖက် ကမ်းခြေ ဖက်မှာ) မှာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း တစ်ခု စတင် ဖြစ်ပေါ် လာနေပါတယ်။ (၂၄-၄-၂၀၁၂ ရက်၊ ရန်ကုန်၊ နံနက် (၄)နာရီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အနောက် တောင်ပိုင်းတွင် လေထု မငြိမ်သက်မှု ဖြစ်နေပါတယ်။ အိန္ဒိယ မိုးလေ၀သ ဌာနရဲ့ သင်္ချာပုံစံ ခန့်မှန်းနည်း အရ ဧပြီလ (၂၈-၂၉) ရက်နေ့ ခန့်တွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ အရှေ့ဖက် ကမ်းခြေ အနီးမှာ မုန်တိုင်းငယ် အဆင်ပ ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားပါတယ်။ စောင်ပကြည့်ဖို့ သတ်မှတ် ထားပါတယ်။ (၂၃-၄-၂၀၁၂ ရက် နံနက် ၁၀း၅၅ နာရီ)
မြန်မာ တနိုင်ငံ လုံးမှာ မြင်ပတက်နေတဲပ အပူရှိန်တွေ ယခုရက်များ အတွင်း လျောပကျ သွားနိုင်ပါတယ်။ (၂၂-၄-၂၀၁၂ ရက်၊ ရန်ကုန်၊ ၀၉း၀၀ နာရီ)
အပူချိန်တွေ မြင်ပမား နေမှုကြောင်ပ UV Index တန်ဖိုးတွေ မြင်ပတက် နေပါတယ်။ အကာအကွယ် မပြုလုပ်ပဲ နေပူထဲ သွားလာခြင်းကို ရှောင်ရှားသင်ပ။ (၂၀-၄-၂၀၁၂ ရက်၊ ရန်ကုန်၊ နံနက် ၀၉း၅၅ နာရီ)
သင်္ကြန် လည်တောပမယ်ဆိုရင် (၁၆-၄-၂၀၁၂ နံနက် ၀၈း၀၀ နာရီ)
ဆူနာမီ သတိပေးချက်ကို (၁၁-၄-၂၀၁၂)ရက် ည(၇)နာရီ နောက်ပိုင်းမှာ ရုတ်သိမ်း သွားခဲပပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်တောပ သင်္ကြန် ထစ်ချုန်း မိုးတွေ တနိုင်ငံလုံး ကြုံတွေ့ ရဖွယ်ရှိ နေပါတယ်။ (၁၃-၄-၂၀၁၂ နံနက် ၀၇း၄၀ နာရီ)
ဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း။ (၁၁-၄-၂၀၁၂ ရက် ညနေ (၃)နာရီ(၅၀)မီနစ်)
မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်ူးဒေသများ နဲ့ မကွေးတိုင်း မြောက်ပိုင်း ဒေသများတွင် မိုးထစ်ချုန်း ရွာနိုင်ပါတယ်။ (၁၁-၄-၂၀၁၂ ရက်၊ ရန်ကုန်၊ ၁၀း၂၀ နာရီ)
နောက် တစ်ပတ်ခန့်အထိ အထက်မြန်မာပြည် ဒေသများတွင် မိုးထစ်ချုန်း ရွာသွန်း နိုင်ပါတယ်။ (၈-၄-၂၀၁၂ ည ၁၂ နာရီအချိန်)
ပဲခူးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွင် မိုးအနည်းငယ် ရွာနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တို့တွင် တောင်ယာ မီးရှို့မှုကြောင်ပ မီးခိုးထွက် နေသော နေရာ (၆၀၀)ကျော် ရှိနေပါတယ်။ မင်းလွင်(Haze) များကြောင်ပ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းမှ လေယာဉ် ခရီးစဉ်များ အနှောင်ပအယှက် ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ (၁-၄-၂၀၁၂ ရက်၊ ရန
မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း ဒေသများ၊ တောင်ပိုင်း ဒေသများနဲ့ အရှေ့ပိုင်း ဒေသများတွင် မိုးဆက်လက် ရွာနိုင် ပါသေးတယ်။ (၁၂-၃-၂၀၁၂ ရက် နံနက် ၁၁း၄၀ နာရီ အချိန်)
နောက် (၇၂)နာရီ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ မြေလတ်ပိုင်း နဲ့ အရှေ့ပိုင်း ဒေသများတွင် နေရာကျဲကျဲ မိုးရွာနိုင်၊ ရွာရန် ၆၀% ရှိပါတယ်။ (၁၁-၃-၂၀၁၂ ရက် နံနက် ၃း၄၅ နာရီ အချိန်)
နွေရောက်ပြီလေ။ နေ့အပူချိန်တွေ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ မြင်ပတက် လာပါ တောပမယ်။ (၇-၃-၂၀၁၂ ရက်၊ ရန်ကုန်၊ နေ့ (၃)နာရီ(၄၀)မီနစ်)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းတစ်ခု စတင်ဖြစ်ပေါ်နေ။ (၂၂-၂-၂၀၁၂ ရက်၊ ရန်ကုန် ၊ နေ့လည် ၁၁း၂၀ နာရီ အချိန်)
မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဒေသစွန်းများမှာ အေးပြီး စွတ်စိုနိုင်တာက လွဲရင်တ ပြည်လုံးမှာ သာယာ နိုင်ပါတယ်။ (၉-၂-၂၀၁၂ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ည ၀၈း၅၅ နာရီ အချိန်)
မြေလတ်ပိုင်း ဒေသ၊ မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသ နဲ့ တောင်ပိုင်း ဒေသတွေမှာ မိုးဖွဲလေးတွေ ကျနိုင်ပါတယ်။ ရွာရန် ၆၀% ရှိပါတယ်။ (၃-၂-၂၀၁၂ ရက်၊ ရန်ကုန်၊ နေ့ ၅း၃၀ နာရီ)
(၁-၂-၂၀၁၂)ရက် နံနက်ပိုင်း မှစတင်ကာ နောက်(၂၄) နာရီမှ (၄၈)နာရီ အတွင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသများနဲ့ အောက်မြန်မာပြည် ဒေသအချို့ တို့တွင် မိုးရွာနိုင်၊ ရွာရန် ရာနှုန်း ၅၀% မှ ၆၀% အထိရှိပါတယ်။ (၁-၂-၂၀၁၂ ရက် နေ့ ၁း၃၀ နာရီအချိန်၊ ရန်ကုန်)
ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၅-၉)ရက် အတွင်း ညအပူချိန်များ အနည်းငယ် ကျဆင်းနိုင်ပြီး အောက်ပိုင်း ဒေသများတွင် မိုးအနည်းငယ် ရွာနိုင်ပါတယ်။ (၁-၂-၂၀၁၂ ရက်၊ ရန်ကုန် နံနက် ၀၁း၂၀ နာရီ)
ဒီတစ်ပတ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အအေးပေါပ လာနိုင်ပါတယ်။ (၂၇-၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက် ၀၈း၀၀ နာရီအချိန်)
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းကို အနောက်မြောက် ဖက်မှ လေအေးများ ၀င်လာဖို့ ရှိနေပါတယ်။ (၂၁-၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့၊ ရန်ကုန် နံနက် ၀၉း၂၀ နာရီ)
လေစီးကြောင်း စုစည်းမှု (ှStreamline convergence) တစ်ခုကြောင်ပ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် တိမ်စွယ်တန်း တစ်ခု အနောက်မှ အရှေ့ဖက်သို့ ဦးတည် ဖြတ်သန်း နေပါတယ်။ (၁၄-၁-၂၀၁၂ ရက်၊ ရန်ကုန်၊ နံနက် ၀၀း၃၁ နာရီ အချိန်)
အရှေ့ပိုင်း ဒေသတွေ အအေးပို လာနိုင်ပြီး အနောက်ပိုင်း ဒေသတွေ မိုးရွာ နိုင်ပါတယ်။ (9-1-2012 Yangon, 04:57 am LST)
ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း THANE (မြန်မာ သိန်းငှက် အမည် ဖြစ်ပါတယ်)ဟာ (၂၉-၁၂-၂၀၁၁) ရက်ညပိုင်းမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ဖက် ကမ်းခြေကို စတင် ဖြတ်သန်းပါတယ်။ (၃၀-၁၂-၂၀၁၁)ရက်နေ့ နေ့ပိုင်းမှာ ဗဟိုချက်ဟာ ကုန်းတွင်းကို လုံးဝ ၀င်ရောက် သွားခဲပပါတယ်။ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့ မှာတောပ မုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန် တ်ိမ်တိုက် တွေဟာ အာရေဗျ ပင်လယ်ထဲကို ထွက်တောပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့ ရန်ကုန် ည
ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း THANE ဟာ လွန်ခဲပတဲပ (၆)နာရီ အတွင်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဖက်ရှိရာ အနောက်ဖက် ဆီကို ဆက်လက် ရေ့လျှားနေခဲပပြီး ပိုမို အားကောင်း လာနေပါတယ်။ (မန္တလေး၊ ၂၉-၁၂-၂၀၁၁ ရက်၊ နံနက် ၀၈း၄၅ နာရီ)
ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုငး THANE ဟာ လွန်ခဲပတဲပ (၁၂) နာရီအတွင်းက အနောက်ဖက်ကို သိသိသာသာ ရွေ့လျှားခဲပပြီး အိန္ဒိယ နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကမ်းခြေကို (၃၀-၁၂-၂၀၁၁) ရက် နံနက်ပိုင်းမှာ Chennai မြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။ (မန္တလေး၊ ၂၈-၁၂-၂၀၁၁ ရက် ည ၁၁း ၄၀ နာရီ)
မုန်တိုင်းငယ် 06B ဟာ ပိုမို အားကောင်း လာကာ အမည်တပ် မုန်တိုင်း THANE အဖြစ် ရောက်ရှိ သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ (ရွှေဘို၊ ၂၇-၁၂-၂၀၁၁ နံနက် ၁၁း၃၀ နာရီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အနောက်တောင် ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ် နေတဲပ 03B မုန်တိုင်းဟာ အားကောင်းတဲပ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာပြီး (၃-၁၂-၂၀၁၁)ရက် ညနေပိုင်းမှာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း အရှေ့ဖက် ကမ်းခြေကို Chennai မြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ကာ ကုန်းတွင်းကို ၀င်ရောက် လိမ်ပမယ်လို့ခန့်မှန်းရ ပါတယ်။ (၂၇-၁၂-၂၀၁၁ ရန်ကုန်၊ နံနက် ၀၆း၂၈ နာရီ)
ခရစ်စမတ် အကြို ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အနောက်တောင် ပိုင်းမှာ 03B မုန်တိုင်း ဖြစ်လာ တောပမယ်။ (၂၄-၁၂-၂၀၁၁ ရက်၊ ရန်ကုန် ညနေ ၃ နာရီ ၁၆ မီနစ်) ရှိတောပ ရှိတယ်။ ဝေးတယ်။ လာနီညာ အကျိုးဆက်အဖြစ် ပစိဖိတ်သမဒ္ဒယာ အနောက်ပိုင်းမှာ မုန်တိုင်း ဖြစ်နေပါတယ်။ (၁၅-၁၂-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၅း၀၀ နာရီ)
မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း နဲ့ အရှေ့တောင်ပိုင်း ဒေသများတွင် ညအပူချိန်များ ကျဆင်းပြီး အအေးပို နိုင်ပါတယ်။ (၁၂-၁၂-၂၀၁၁ ရက် နပနက် ၀၃း၃၀ နာရီအချိန်)
Though the first storm of the Southern Hemisphere Summer has formed over the Southern Indian Ocean, Bay of Bengal still remains calm and fine. (6-12-2011 in Durban, South Sfrica (COP-17, CMP-7), at 02;00 p.m.,) (၂-၁၂-၂၀၁၁)ရက် နေ့ပိုင်းမှာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း အားပျော ပသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်း နဲ့ အရှေ့ပိုင်း ဒေသများမှာ ညအပူချိန်များ ကျဆင်းပြီး အအေးပို နိုင်ပါတယ်။ (၂-၁၂-၂၀၁၁ ရက်၊ ဘန်ကောက် ၁၂း၃၀ နာရီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းမှာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း ပြန်လည် ဖြစ်ပေါ် နေပြန်ပါပြီ။ မုန်တ်ုင်း ဖြစ်ဖို့အခြေအနေ မပြသေးပါ။ (၂-၁၂-၂၀၁၁ ရက်၊ ဘန်ကောက်၊ နံနက် ၀၆း၄၉ နာရီ)
The low pressure area over the south Bay of Bengal has weakened again. (1-12-2011 in Bangkok at 10:45 hrs LST)
The tropical storm 05A i9s attaining its strength as it drifted morthwestwards. (Posted on 30 November, 2011 in Bangkok at 08:15 am LST)
ပြီးခဲပတဲပ ရက်သတ္တပတ် အတွင်း အာရေဗျ ပင်လယ် နဲ့ တောင်တရုတ် ပင်လယ်တို့မှာ မုန်တိုင်းမိုးတွေ ရခဲပပေမယ်ပ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် မှာတောပ အရှေ့လေပွေလှိုင်း မိုးသာ ရခဲပ ပါတယ်။ (၁၇-၁၁-၂၀၁၁ ရက်၊ နံနက် ၀၉း၃၀ နာရီ)
အိန္ဒိယ မိုးလေ၀သ ဌာနက (၂၁-၁၁-၂၀၁၁) ရက်နေ့မှာ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းမှာ မုန်တိုင်း တစ်ခု ဖြစ်လာ နိုင်တယ်လို့ သင်္ချာ ပုံစံ မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းနည်း အရ ခန့်မှန်း ထားပါတယ်။ (၁၄-၁၁-၂၀၁၁) ရက် စင်္ကာပူ စံတော်ချိန် ည ၁၀း၂၅ နာရီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့တောင် ပိုင်းမှာ မုန်တိုင်းငယ် တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ အခြေအနေတွေ ပြလာ တာကြောင်ပ စောင်ပကြည့် အဆင်ပ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ (၁၁-၁၁-၂၀၁၁ ၇က်၊ စင်္ကာပူ၊ ညနေ ၆း၃၅ နာရီ)
အနောက်ဖက်က အာရေဗျ ပင်လယ် မှာရော အရှေ့ဖက်က တောင်တရုတ် ပင်လယ်ပြင် မှာရော မုန်တိုင်းတွေ ပြိုင်တူ ဖြစ်နေပြီး၊ ကြားက ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် ကသာ ကျန်နေ ပါတယ်။ (၈-၁၁-၂၀၁၁ ရက်၊ စင်္ကာပူ၊ နံနက် ၀၉း၀၀ နာရီ)
တောင်အာရှမှာ မုန်တိုင်းရာသီ မကုန်သေးပါ။ အာရေဗျ ပင်လယ် နဲ့ တောင်တရုတ် ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ မုန်တိုင်းတွေ ဖြစ်လာ ပါဦးမယ်။ (၆-၁၁-၂၀၁၁ ရက် ၊ စင်္ကာပူ နံနက် ၀၉း၂၅ နာရီ)
02B မုန်တိုင်းကြောင်ပ အောက်တိုဘာလ အတွက် မိုးရွာသွန်းမှုမှာ မကွေးတိုင်း အလယ်ပိုင်းနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အလယ်ပိုင်း တွေမှာ မိုးရေချိန် ၁၀ လက်မ နဲ့ အထက် ရွာသွန်း ခဲပပါတယ်။ (၃-၁၁-၂၀၁၁ စင်္ကာပူ ညနေ ၇း၀၀ နာရီ)
မိုးလား၊ တိမ်လား၊ မြူလား ခွဲခြားဖို့တောပ ခက်ပြီ။ (၂-၁၁-၂၀၁၁ ရက် စင်္ကာပူ ညနေ ၃း၃၀ နာရီ)
Facebook တွင် update information များရနိုင်ပါပြီ။
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်ရော အာရေဗျ ပင်လယ်ရော လေထု မငြိမ်သက်မှုတွေ ဖြစ်နေပေမယ်ပ လတ္တီတွဒ် အနိမ်ပ အမြင်ပ ကွာခြားမှုကြောင်ပ အာရေဗျ ပင်လယ်ဖက်မှာ မုန်တိုင်း ဖြစ်ဖို့ အခြေအနေ ပိုကောင်းနေပါတယ်။ (Singapore, 28-10-2011 at 17:05 LST) အောက်တိုဘာ လကုန်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲပ မုန်တိုင်း စောင်ပကြည့်ရန် လိုအပ်နေသေး။ (၂၄-၁၀-၂၀၁၁ ရက် ည ၁၁း၅၅ နာရီ)
အောက်တိုဘာလ (၂၃-၂၆) ရက်အတွင်း ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်းငယ် တစ်လုံး ထပ်မံ ဖြစ်ပေါ်နိုင် ဟု ခန့်မှန်း ရပါတယ်။ (၂၁-၁၀-၂၀၁၁ ရက် ညနေ (၂)နာရီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်ထဲက 02B မုန်တိုင်းဟာ ၆ နှစ် အတွင်း ၆ ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးတည် တိုက်ခတ်ခဲပတဲပ မုန်တိုင်းအဖြစ် သမိုင်း ၀င်ခဲပပြန်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀-၁၀-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၇း၄၁ နာရီ) ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် ရှိ 02B2011 အတွက် Final Bulletin (၂၀-၁၀-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၂း၁၀ နာရီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့မြောက် ပိုင်းမှ မုန်တိုင်းငယ်ဟာ (၁၉-၁၀-၂၀၁၁) ရက်နေ့ ညနေ (၈)နာရီ အချိန်တွင် ဘင်္ဂလားဒေပရှ် နိုင်ငံ ကောပဗဇားမြို့ နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မောင်တောမြို့ တို့ကြားမှ ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက် သွားခဲပပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်းတွင်း မုန်တိုင်းငယ် အဖြစ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ် နဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း တို့ကို ဆက်လက် ဖြတ်သန်း သွားနေပါတယ်။ (၁၉-၁၀-၁၁)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့မြောက် ပိုင်းမှ မုန်တိုင်းငယ်ဟာ (၁၉-၁၀-၂၀၁၁) ရက်နေ့ ညနေ (၄)နာရီခွဲ အချိန်တွင် ဘင်္ဂလားဒေပရှ် နိုင်ငံ ကောပဗဇားမြို့ နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မောင်တောမြို့ တို့ကြားမှ ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက် သွားခဲပပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်းတွင်း မုန်တိုငးငယ် အဖြစ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ် နဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း တို့ကို ဆက်လက် ဖြတ်သန်း သွားနေပါတယ်။ (၁၉-၁၀-၂�
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့မြောက် ပိုင်းရှိ မုန်တိုင်းငယ်ဟာ သိသိသာသာ အားကောင်းလာခြင်း မရှိပဲ ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှ စတင်ကာ ဘင်္ဂလားဒေပရ်ှ နိုင်ငံ ကောပဗဇားမြို့ နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့ ကြားမှ ကုန်းတွင်း ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော် ၀င်ရာက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉-၁၀-၂၀၁၁ ရက် ညနေ ၄း၀၀ နာရီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့အလယ် ပိုင်းတွင်ရှိ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းဟာ ပိုမို အားကောင်း လာပြီး မုန်တိုင်း တစ်လုံး ဖြစ်လာကာ နောက် (၂၄)နာရီ အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေပရှ် နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဒေသကို ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက် မည်ဟု ခန့်မှန်း ရပါတယ်။ (၁၈-၁၀-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၅း၅၀နာရီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲပ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းဟာ ပိုမို အားကောင်း လာကာ သိသာ ထင်၇ှားတဲပ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း (Well marked low) တစ်ခု ဖြစ်လာပြီး မကြာမီ မုန်တိုင်းငယ် တစ်ခု ဖြစ်လာ ပါတောပမယ်။ (၁၈-၁၀-၂၀၁၁ ရက် ည ၈း၅၅ နာရီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်းမှာ လေဖိအားနည်ူး ရပ်ဝန်း တစ်ခု ဖြစ်ပေါ် နေပြီး မကြာမီ ပိုမို အားကောင်း လာကာ မုန်တိုင်း တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ (၁၇-၁၀-၂၀၁၁ ညနေ ၃း၅၅ နာရီ)
ဗီယက်နမ် ကမ်းခြေသို့ ချဉ်းကပ် လာနေတဲပ Banyan မုန်တိုင်းဟာ ဗီယက်နမ်ကမ်းကို မဖြတ်မီ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း အဖြစ်သို့ အားလျောပ သွားခဲပပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၅-၁၀-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၄း၁၁ နာရီ)
အားအနည်းငယ် မှ အသင်ပအတင်ပ ရှိတဲပ လာနီညာ ရာသီဥတု ဖြစ်စဉ် ဖြစ်နေပါပြီ။ (၁၄-၁၀-၂၀၁၁ ရက်၊ နံနက် ၂း၅၅ နာရီ )
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်မှာ လေထု မငြိမ်သက်မှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေစဲ ဖြစ်သော်လည်း မုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ ရောက်၇ှိ လာနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ (၁၀-၁၀-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၉း၅၄ နာရီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်းမှာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပေမယ်ပ မုန်တိုင်းဖြစ်ရန် ဆက်လက် စောင်ပကြည့်ဖို့ လိုအပ်နေ ပါသေးတယ်။ (၇-၁၀-၂၀၁၁ နံနက် ၀၉း၄၉ နာရီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းမှာ (၆-၁၀-၂၀၁၁)ရက် နေ့လည်ပိုင်းမှ စတင်ကာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းတစ်ခု စတင် ဖြစ်ပေါ် နေပါတယ်။ (၆-၁၀-၂၀၁၁ ည ၁၀း၃၇ နာရီ)
လွန်ခဲပတဲပ (၁၂)နာရီ အတွင်း Nalgae မုန်တိုင်းဟာ သိသိသာသာ အားလျောပ သွားခဲပပြီး လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း ဖြစ်သွားခဲပ တဲပအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ကို ရောက်ဖို့ အခွင်ပအရေး နည်းသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (၆-၁၀-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၇း၄၅ နာရီ)
မုတ်သုံလေ ဆုတ်ခွာသွားပြီး ပထမဆုံး မုန်တိုင်း တစ်ခု ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းမှာ အောက်တိုဘာလ (၉)ရက် ခန့်မှာ စတင် ဖြစ်ပေါ်နိုင် ပါတယ်။ (၅-၁၀-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၉း၀၈ နာရီ)
မုတ်သုံလေ လုံးဝ ဆုတ်ခွာ သွားခဲပပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Nesat အကျိုး သက်ရောက်မှုလည်း မရှိတောပ ပါဘူး။ ဒါပေမယ်ပ Nesat နောက်က ပါလာတဲပ Nalgae မုန်တိုင်း အကျိုးဆက်ကြောင်ပ မိုးရွာသွန်း နိုင်မှုကိုတောပ (၁၀-၁၀၂၀၁၁)ရက်လောက်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ (၃-၁၀-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၁၀း၁၀ နာရီ)
တရုတ် ပြည်မကြီး ပေါ်မှာ ဖြစ်နေတဲပ လေဖိအားများ ရပ်ဝန်း Blocking High ကြောင်ပ Nesat ဟာ အနောက်ဖက်ကို အိဆင်း လာခဲပပေမယ်ပ လွန်ခဲပတဲပ (၁၂)နာရီ အတွင်းမှာ အားလျောပကျ လာခဲပတာကြောင်ပ မြန်မာ နိုင်ငံကို မိုးပေးဖို့ မပြင်းထန် နိုင်တောပပါဘူး။ (၁-၁၀-၂၀၁၁ ရက်၊ ည ၉း၁၅ နာရီ) Nesat မုန်တိုင်းဟာ သွားရာ လမ်းကြောင်း အနောက်ဖက်မှ အနောက်မြောက် ဖက်ကို အနည်းငယ် ပြောင်းသွား ခဲပတာကြောင်ပ မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ကို ရောက်ဖို့ အခွင်ပအရေး နည်းသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင်ပ မုန်တိုင်းမိုး ရွာဖို့ အခွင်ပအရေး နည်းသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (၃၀-၉-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၆း၁၀ နာရီ)
နောက်(၄၈) နာရီအတွင်း အလယ်ပိုင်း ဒေသများ၊ မြေလတ်ပိုင်း ဒေသများ နဲ့ အောက်ပိုင်း ဒေသများ မိုးရွာနိုင်။ (၂၆-၉-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၈း၁၀ နာရီ)
အနောက်တောင် မုတ်သုံလေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အထိ ဆုတ်ခွာခဲပပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဖက်က ရွေ့လျှား လာနေတဲပ မုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန် များကြောင်ပ အောက်ပိုင်း ဒေသများ မိုးရွာနိုင်ပြီး၊ စက်တင်ဘာလ လကုန်ခန့်မှာ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းမှာ လေစိုင်ဝဲ တစ်ခု ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ပါတယ်။ (၂၅-၉-၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ၁၇း၂၅ နာရီ) အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်မြောက် ပိုင်းမှ မုတ်သုံလေ ဆက်လက် ဆုတ်ခွာ နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း မှလည်း မုတ်သုံ စတင် ဆုတ်ခွာ နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉-၉-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၉း၅၀ နာရီ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်မြောက် ပိုင်းမှ အနောက်တောင် မုတ်သုံလေ စတင် ဆုတ်ခွာပါပြီ၊ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှလည်း စက်တင်ဘာလ (၂၀)ရက် ခန့်မှာ စတင် ဆုတ်ခွာ ပါလိမ်ပမယ်။ (၁၅-၉-၂၀၁၁ ရက်နေ့ နံနက် ၀၇း၂၀ နာရီ)
မုတ်သုံလေ အားပျိုးမှု တစ်ခုကြောင်ပ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှ မုတ်သုံလေ ဆုတ်ခွာ နေမှုကို တစ်ပတ်လောက် နောက်ဆုတ်သွား နိုင်တဲပအတွက် စက်တင်ဘာ (၂၀)ရက် ခန့်မှာမှ စတင်ဆုတ်ခွာ နိုင်ပါလိမ်ပမယ်။ (၁၄-၉-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၅း၃၀ နာရီ) မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှ မုတ်သုံ စတင် ဆုတ်ခွာစပြုနေပါပြီ။ ကမ်းရိုးတန်း အတိုင်း လေပွေလှိုင်း တစ်ခု ဖြတ်သန်ူး သွားမှုကြောင်ပ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများ မိုးပိုနိုင်ပြီး မြန်မာပ ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်း အသင်ပအတင်ပ ရှိနိုင်။ (၁၂-၉-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၅း၀၀ နာရီ)
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပေါ်မှာ တိမ်တွေ ဖုံးလွှမ်းမှု လျောပနည်း နေပါတယ်။ (၉-၉-၂၀၁၁ ည ၀၈း၀၀ နာရီ)
သင်္ချာပုံစံသုံး ရာသီဥတု ခန့်မှန်းချက် (NWP) များအရ လာမယ်ပ ရက်များ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှာ မုတ်သုံလေများ အခြေပျက် စတင် ပြိုကွဲ လာတောပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၆-၉-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၈း၀၀ နာရီ)
မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဒေသတွေမှာ မိုးလျောပ နေပါပြီ။ စက်တင်ဘာလ (၇)ရက်နေ့ မှ (၁၀)ရက်နေ့ အတွင်း ဘင်္ဂလား ပင်လယ် အော်မှာ မုတ်သုံလေ အားပြန် ပျိုးလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း ဒေသ တွေမှာ မိုးပြန် တိုးလာ ပါဦးမယ်။ (၅-၉-၂၀၁၁ ရက်၊ နံနက် ၀၈း၂၅ နာရီ)
ဒီရက်ပိုင်း အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် တိမ်ပြာတဲပ နေ့ကို စတင် တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအခြေအနေသာ ခိုင်မြဲလာရင် မုတ်သုံလေဟာ မကြာမီ နှုတ်ဆက် ဆုတ်ခွာတောပမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၃-၉-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၈း၂၀ နာရီ)
မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာ မိုးတ်ိမ်တွေ ဖြစ်ထွန်းနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ မိုးတွေလျောပနည်းနေပါတယ်။(2-9-2011 နံနက် ၁၁ နာရီခွဲ)
ယနေ့မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက်(၂၆-၈-၂၀၁၁ နံနက် ၁၂ နာရီ)
နောက် (၂၄)နာရီ အတွင်း အာရေဗျ ပင်လယ်ပြင်ဖက်မှ မုတ်သုံလေ အားပြန်ပျိုး မှုကြောင်ပ မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း နဲ့တောင်ပိုင်း ဒေသတွေမှာ မိုးကောင်း နိုင်ပါတယ်။ ကိုကိုးကျွန်း နဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် တစ်ဝိုက် မြန်မာပ ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်း အသင်ပအတင်ပမှ လှိုင်းကြီး နိုင်ပါတယ်။ (၂၆-၈-၂၀၁၁ ရက် ၀၈း၀၀ နာရီ)
လာမယ်ပ တစ်ပတ် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေဟာ ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒယာ အနောက်ဖက်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲပ မုန်တိုင်း Nanmadol ရဲ့ေ၇ွ့လျှားမှု ဦူးတည်ရာ ဖက်ပေါ်မှာ မူတည် နေပါတယ်။ (၂၅-၈-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၆း၀၀ နာရီ)
(၂၃-၈-၂၀၁၁) ရက် ညအထိ မိုးလျောပ နေပါပမယ်။ နောက်ထပ် ဆက်ပြီးလည်း လျောပနည်း နေနိုင်ပါတယ်။ (၂၂-၈-၂၀၁၁ ရက် နပနက် ၀၃း၄၅ နာရီ)
မိုးအားတွေ ဆက်လက်လျောပ ကျလာနေပါတယ်။ (၁၉-၈-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၅း၁၅ နာရီ)
မုတ်သုံလေ အားအသင်ပအတင် ပနဲ့ပဲ အရှေ့ လေပွေလှိုင်း များကြောင်ပ မိုးဆက်လက် ရွာနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၇-၈-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၈း၀၀ နာရီ)
မုတ်သုံ လေဖိအားနည်း ချိုင်ပ၀ှမ်း (monsoon trough)အတိုင်း အရှေ့ လေပွေ လှိုင်းငယ်များ မွန်ပြည်နယ် - ပဲခူး - ရန်ကုန် - ဧရာဝတီ - ရခိုင် လမ်းကြောင်းအတိုင်း ရွေ့လျှားနေကြပါတယ်။ (၁၆-၈-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၉း၁၅ နာရီ)
သြဂုတ်လ (၁-၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်း ပြည်နယ် နဲ့ တိုင်းများအလိုက် ရွာသွန်းခဲပသော မိုးရေချိန်များ။
မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းစွန်း ဒေသများနဲ့ တောင်ပိုင်း ဒေသများ မှာသာ မိုးထစ်ချုန်း ရွာနိုင်ပြီး ကျန်ဒေသ များမှာ မိုးအား လျောပနည်း သွားပါလိမ်ပမယ်။ (၁၅-၈-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၈း၂၅ နာရီ)
တပြည်လုံးမှာ မိုးအားတွေ သိသိသာသာ လျောပနည်း လာနေပါတယ်။ (၁၃-၈-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၅း၀၅ နာရီ)
ကချင်ပြည်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် တွေက လွဲရင် တပြည်လုံးမှာ မိုးအားတွေ လျောပနေပါပမယ်။ (၁၂-၈-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၇း၄၅ နာရီ)
မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဒေသတွေမှာ မိုးအများဆုံး ရွာနေပါတယ်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသ နဲ့ တောင်ပိုင်း ဒေသတွေမှာ မိုးအသင်ပအတင်ပ ရွာနေပါတယ်။ (၈-၈-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၄း၀၀ နာရီ) Nock Ten မုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန် တိမ်တိုက် များကြောင်ပ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်မှာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ် နေစေပြီး ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် ထဲတွင် မုတ်သုံလေကို အားကောင်း နေစေပါတယ်။ (၂-၈-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၅း၅၀ နာရီ)
Nock ten မုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန် တ်ိမ်တိုက် မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော် သွားနေပါပြီ။ (၁-၈-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၅း၁၀ နာရီ)
နောက် (၄၈)နာရီမှ နာရီ(၆၀) အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်း နဲ့ မြေလတ်ပိုင်း တွေမှာ မိုးတွေ သည်းထန် နိုင်ပါတယ်။ (၃၁-၇-၂၀၁၁ ရက်၊ နံနက် ၃း၃၀ နာရီ)
နောက်ထပ် (၇၂)နာရီခန့် မိုးအား လျောပနည်း နေနိုင်ပြီး၊ (၃၁-၇-၂၀၁၁) ရက်နေ့ ခန့်တွင် Nock-Ten မုန်တိုင်းကြောင်ပ မိုးပို လာဖွယ်ရာ ရှိနေ။ (၂၇-၇-၂၀၁၁ ရက်၊ နံနက် ၀၈း၀၀ နာရီ)
မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမှ လွဲ၍ နောက်ထပ် (၄၈)နာရီမှ (၇၂)နာရီခန့် အထိ တပြည်လုံးတွင် မိုးအား လျောပနည်း နေပါလိမ်ပ ဦးမယ်။ (၂၆-၇-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၁း၃၀ နာရီ)
အခုရက်ပိုင်းများ အတွင်း မိုးအား လျောပနည်း နေပါလိမ်ပမယ်။ (၂၃-၇-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၈း၀၅ နာရီ)
ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင်တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင်ပအတင်ပသာ ရှိနေပြီး လှို်င်းအမြင်ပ များလည်း လျောပကျ လာမည်။ (၂၀-၇-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၁၁း၂၅ နာရီ)
ယနေ့မှ နောက် (၉၆)နာရီ အတွင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ကမ်းရိုးတန်း နဲ့ ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ ရာသီဥတု ဆိုးဝါးခြင်း နဲ့အတူ လေ နဲ့လှို်င်း အန္တရာယ်ကို အထူး သတိထား ရပါပမယ်။ (၁၇-၇-၂၀၁၁ ရက် ညနေ ၄း၀၀ နာရီအချိန်)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်း နဲ့ ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင်မှာ မုတ်သုံလေ အားကောင်း နေပါတယ်။ (၁၆-၇-၂၀၁၁ ရက် ည (၇း၃၀) နာရီအချိန်)
ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်းမှာ ထစ်ချုန်းမိုး ရွာနိုင်ပြီး လှိုင်း ၅ ပေ မှ ၇ ပေ ခန့်အထိ ရှိနိုင်။ ကမ်းရိုးတန်း ဒေများတွင် မိုးအနည်းငယ် ရွာနိုင်သည်မှ လွဲပြီး တပြည်လုံးတွင် မိုးအားလျောပ နေပါတယ်။ (၉-၇-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၄း၅၅ နာရီ)
တပြည်လုံးမှာ မိုးအားတွေ လျောပကျ နေပါလိမ်ပဦးမယ်။ (၇-၇-၂၀၁၁ ရက်၊ ၀၇း၁၀ နာရီ)
တပြည်လုံးမှာ ဇူလိုင်လ အလယ်လောက် အထိ မိုးအား ဆက်လက် လျောပနည်း နေပါဦးမယ်။ (၆-၆-၂၀၁၁ ရက်၊ နံနက် ၃း၄၀ နာရီ)
တပြည်လုံးမှာ နောက်ထပ် ရက်အတန်ကြာ မိုးအား လျောပနေ ပါဦးမယ်။ (၁-၇-၂၀၁၁ ရက်၊ နံနက် ၁၁း၃၀ နာရီ)
လာမယ်ပ ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် မိုးပို၍ အလယ်ပိုင်းနဲ့ အောက်ပိုင်း ဒေသများမှာ မိုးလျောပ နည်းသွား ပါပမယ်။ (၂၉-၆-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၇း၁၅ နာရီ)
မုတ်သုံလေဦး မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အထိ ဆက်လက် တည်ရှိ နေသော်လည်း မုတ်သပုံလေ အင်အား အသင်ပအတင်ပသာ ရှိနိုင်သဖြင်ပ လာမယ်ပ နောက်(၇၂) နာရီခန့် မိုးအား လျောပနည်း နေဖွယ် ရှိပါတယ်။ (၂၈-၆-၂၀၁၁ ရက် နေ့လည် ၁၂း၅၅ နာရီအချိန်)
လာမယ်ပ ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း မိုးအား လျောပသွား နိုင်သော်လည်း မြစ်အငယ် များတွင် ရေလွှမ်းနိုင်မှု ကြုံတွေ့ရနိုင်။ (၂၇-၆-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၈း၀၀ နာရီအချိန်)
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း HAIMA ၏ အကြွင်းအကျန် တိမ်တိုက် များကြောင်ပ နောက် (၂၄-၃၆)နာရီ အတွင်း အရှေ့ပိုင်း ဒေသများ နှင်ပ မြေလတ်ပိုင်း ဒေသများတွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်။ (၂၆-၆-၂၀၁၁ ရက်၊ နံနက် ၀၁း၀၅ နာရီအချိန်)
လာမယ်ပ ရက်သတ္တ တစ်ပတ်အတွင်း မုတ်သုံ အားလျောပကျလာပြီး မိုးအား လျောပသွား နိုင်သော်လည်း အရှေ့ဖက်မှ မုန်တိုင်း Haima ရဲ့ အကြွင်းအကျန် များကြောင်ပ အထက်ပိုင်း ဒေသများ မိုးရွာ ဖွယ်ရာရှိ။ (၂၅-၆-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၆း၀၀ နာရီ)
မြန်မာပကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်မှာ မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေတဲပအတွက် မိုးကြီးပြီး လှို်င်းလည်း ကြီးနိုင်ပါတယ်။(၁၉-၆-၂၀၁၁ရက် နံနက် ၀၆း၄၅ နာရီအချိန်)
မြန်မာပ ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက် မကြာခဏ မိုးသက်လေပြင်း ကျရောက်ပြီ်း တစ်ခါတစ်ရန် လှိုင်းကြီးနိုင်၊ သင်္ဘောငယ်များ ကမ်းမှဝေးရာသို့ သွားလာခြင်းကို ရှောင်ရှားသင်ပ၊ အခြား သင်္ဘောများလည်း သတိပြု သွားလာရန် လိုအပ်။ (၁၈-၆-၂၀၁၁ ရက်၊ နံနက် ၀၉း၀၅ နာရီ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက် ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ် နေသော မုန်တိုငးငယ်ဟာ ပိုမို အားကောင်း လာတဲပအတွက် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်မှာ မုတ်သုံလေ အားကောင်း နေစေပါတယ်။ မြန်မာပ ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက် မကြာခဏ မိုးသက်လေပြင်း ကျရောကပြီ်း တစ်ခါတစ်ရန် လှိုင်းကြီးနိုင်၊ သင်္ဘောငယ်များ ကမ်းမှဝေးရာသို့ သွားလာခြင်းကို ရှောင်ရှားသင်ပ၊ အခြား သင်္ဘေများလည်း သတိပြု သွားလာရန် လိုအပ်။ (၁၈-၆-၂၀၁၁ �
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် မြောက်ပိုင်းရှိ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း မုန်တိုင်းငယ် တစ်ခုဖြစ်လာ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်မည် ဖြစ်သဖြင်ပ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် အန္တရာယ် မရှိပါ။ (၁၇-၆-၂၀၁၁ ရက် ည ၁၁း၃၀ နာရီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အနောက်မြောက် ပိုင်းရှိ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း မုန်တိုင်း တစ်ခုဖြစ်ရန် ပိုမို အားကောင်း လာနေသော်လည်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ကမ်းခြေကို မကြာမီ ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက် သွားလိမ်ပမည်ဟု ခန့်မှန်းရ။ (၁၇-၆-၂၀၁၁ ရက်၊ နံနက် ၀၁း၃၅ နာရီ အချိန်)
ဇွန်လ အကုန်အထိ မိုးကောင်းနိုင်၊ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် မြောက်ပိုင်းမှာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင် သော်လည်း မုန်တိုင်းဖြစ်ရန် စောင်ပကြည့်ဖို့ လိုအပ် နေဆဲဖြစ်၊ မုန်တိုင်း ဖြစ်လာပါ ကလည်း မြန်မာပြည် အတွက် အန္တရာယ် လုံးဝမရှိနိုင်ပါ။ (၁၆-၆-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၈း၀၅ နာရီအချိန်) အခု ရက်သတ္တပတ် အတွင်း မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေပြီး ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတွေ မိုးကောင်း နိုင်ပါတယ်။ (၁၅-၆-၂၀၁၁ ရက်နေ့ နံနက် ၀၈း၅ မီနစ်)
ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင်မှာ မုတ်သုံလေ အားကောင်း နေပါတယ်။ (၁၄-၆-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၇း၁၅ နာရီအချိန်)
အနောက်ဖက်ရှိ အာရေဗျပင်လယ် နဲ့ အရှေ့ဖက်ရှိ တောင်တရုတ် ပင်လယ်ဖက်မှာ အပူပိုင်း မုန်တိုင်းငယ် တစ်လုံးစီ ပြိုင်တူ ဖြစ်နေပါတယ်။ ABC ဆက်စပ်မှု အရ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်ထိပ် ကုန်းတွင်း ထဲမှာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် နဲ့ ချင်ပြည်နယ် တွေမှာ မိုသည်းထန် နေပါတယ်။ (၉-၆-၂၀၁၁ ညနေ(၆)နာရီ(၂၃)မိနစ်)
ဇွန်လ (၂၁)ရက်နေ့ အထိ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် တွင် မုတ်သုံလေ အားမှန်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တ၀ှမ်းတွင် ရွာသွန်းမြဲ မိုးရေချိန် များကို ပြည့်မီ နိုင်သော်လည်း ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင် မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိသေးပါ။ (၈-၆-၂၀၁၁ ရက်၊ ညနေ (၅)နာရီ (၂၀)မီနစ် အချိန်)
(၄၈)နာရီ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို မုန်တိုင်းဝင်မယ် ဆိုတာဟာ အခြေအမြစ် မရှိတဲပသတင်း ကောလဟာလ သာဖြစ်ပါတယ်။ (၄-၆-၂၀၁၁ ရက် ည ၁၀း၂၀ နာရီအချိန်)
၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လကုန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မုန်တိုင်း အန္တရာယ် ကင်ရှင်း နိုင်ပါပြီ။ (၂၆-၅-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၆း၄၅ နာရီအချိန်)
အနောက်တောင် မုတ်သပံလေ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းအထိ ဆက်လက် ၀င်ရောက်နေပါတယ်။ (၂၃-၅-၂၀၁၁ ရက်၊ နံနက် ၀၆း၄၅ နာရီ) အနောက်တောင် မုတ်သုံလေ တပြည်လုံးသို့ ဆက်လက် ၀င်ရောက်လျက် ရှိနေ။ (၂၁-၅-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၆း၄၄ နာရီ နေပြည်တော်)
မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာ မိုးတိမ်တောင်တွေ လျောပနည်း လာနေပါတယ်။ (၂၀-၅-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၉း၀၀ နာရီ နေပြည်တော်)
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသများကို မုတ်သုံလေ ၀င်ရောက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ဒေသ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသများ ကိုလည်း တဆက်တည်း ၀င်ရောက်ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ (၁၉-၅-၂၀၁၁ ရက် နေ့ ၀၂း၀၀ နာရီအချိန်)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်မှာ မေလ (၂၄)ရက်နေ့အထိ မုန်တိုင်း မဖြစ်နိုင်သေး တဲပအပြင် မိုးအားလည်း လျောပနည်း နေပါဦးမယ်။ (၁၈-၅-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၄း၂၁ နာရီအချိန်) ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း နဲ့ ပဲခူးတိုင်း အနောက်ဖက် ခြမ်းတွေမှာ ထစ်ချုန်းမယ်ပ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ (၁၅-၅-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၁း၃၈ နာရီ အချိန်)
လာမယ်ပ မေလ(၁၇)ရက် နေ့အထိ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်မှာ မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့ အလားအလာ မရှိသေး တဲပအပြင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း မှာလည်း မိုးအားတွေ လျောပနည်း နေပါဦးမယ်။ (၁၄-၅-၂၀၁၁ ရက်နေ့ နံနက် ၀၅း၃၅ နာရီအချိန်)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်မှာ မုန်တိုင်း မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ နောက်ထပ် (၃)ရက်ခန့် မိုးအား လျောပသွားဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ (၁၁-၅-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၅း၀၀ နာရီအချိန်တွင် Post လုပ်သည်။)
မွန်-တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက် နဲ့ ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင် တွေမှာ မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်ပြီး လှို်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ (၁၀-၅-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၅း၃၀ နာရီအချိန်)
အနောက်တောင် မုတ်သုံလေ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကို စတင်ဝင်ရောက်နေပြီ။ (၈-၅-၂၀၁၁ ရက်နေ့ ည(၁၁)နာရီအချိန်)
မေလ (၁၁)ရက်မှ (၁၇)ရက် အတွင်း ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင် မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်။ သေချာမှု ၆၀% ရှိ။ (၄-၅-၂၀၁၁၀ ရက် ည ၁၁း၃၀ နာရီအချိန်)
ရန်ကုန် အပါအ၀င် တပြည်လုံးတွင် တစ်ပတ်လုံး မိုးရွာနေဖို့ ရှိပါတယ်။ (၂၇-၄-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၄း၀၀ နာရီ အချိန်)
မိုးတိမ်တောင်တွေကို သတိထားရလိမ်ပမယ်။ (၂၅-၄-၂၀၁၁ ရက် နပနက် ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်)
မြန်မာနိုင်ငံ အနီးတ၀ိုက်မှာ မိုးတိမ်တောင်တွေ လျောပနည်း နေပါတယ်။ (၂၀-၄-၂၀၁၁ ရက် နေ့ ၁၁း၃၀ နာရီ အချိန်)
ရန်ကုန်မြို့ အပူချိန် ယခု ရက်သတ္တပတ် အတွင်း အများအားဖြင်ပ 98°F-99°F တွင် တန့်နေဖွယ် ရှိပါသည်။ (၁၉-၄-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၆း၀၀ နာရီ)
ရန်ကုန်မြို့အတွက် (၆)ရက်စာ ခန့်မှန်းချက်။ ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့အပူချိန် 100°F ကျော်နိုင်ပါတယ်။ (Posted on 17-04-2011 at 17;00 MST)
မိုးတိမ်တောင် တွေကို သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ (၁၃-၄-၂၀၁၁ ၂၂း၀၀ နာရီ)
လာနီညာ အားလျောပ လာနေသော်လည်း ဆက်လက် ရှိနေဆဲဖြစ်၊ မေလအထိ ဆက်လက် ရှိနိုင်။ ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒယာ အတွင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ပထမဆုံး မုန်တိုင်း စတင်ဖြစ်။ (၃-၄-၂၀၁၁ ရက်၊ ၂၃း၃၀ နာရီ) ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်းရှိ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းကို နှိုးဆော် အဆင်ပမှ စောင်ပကြည့် အဆင်ပသို့ ပြန်လည် လျှောပချ သတ်မှတ် လိုက်ပါပြီ။ (၃၀-၃-၂၀၁၁ ရက် နံနက် ၀၄း၀၀ နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်)
ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင်ရှိ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း ဆက်လက် တည်ရှိ နေဆဲဖြစ်။ (၂၉-၃-၂၀၁၁ ရက်နေ့ ည(၉)နာရီ (၃၀)မီနစ်)
ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်းရှိ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း ပိုမို အားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ် တစ်ခု မကြာမီ ဖြစ်လာနိုင်။ (၂၉-၃-၂၀၁၁ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီ)
ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်းက လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း အားကောင်း လာခြင်း မရှိသေးပါ။ (၂၉-၃-၂၀၁၁ နံနက် ၀၁း၅၅ နာရီ)
ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်းမှာ စောင်ပကြည့်ရမယ်ပ နေရာတစ်ခု သံသယ ဖြစ်ဖွယ် တွေ့နေ ရပါတယ်။ (၂၈-၃-၂၀၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် Post လုပ်သည်။)